बामदेव निवासमा ५ शिर्ष नेताबीच भिम रावलको इन्ट्री ,के विषयमा परामर्श भयो ? – www.agnijwala.com
बामदेव निवासमा ५ शिर्ष नेताबीच भिम रावलको इन्ट्री ,के विषयमा परामर्श भयो ?
काठमाडौं । बामदेव निवास भैसेपाटीमा नेकपाका ५ सचिवालय सदस्यको भिम रावल सहित छुट्टै बैठक बसेको छ । सभामुख र एमसीसीको बिषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको निकट स्रोतले बताएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सभामुख चयन र एमसीसीको बिषय पेचिलो बनिरहेका बेला अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीइतरका नेताहरुले छुट्टै परामर्स गरेका छन् ।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावल जम्मा भएका थिए । रावल ओलिका कट्टर बिरोधि हुन। रावल उपस्थितिले यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिरहेको छ। बैठकमा एमसीसी र सभामुखका बिषयमा अध्यक्ष दाहालले अन्य नेताहरुलाई ब्रिफिड गरेको स्रोतले बताएको छ ।
बैठकमा सभामुखको बिषय पेचिलो बनेको अध्यक्ष दाहालले बताएका थिए । ‘म र प्रधानमन्त्रीबीच लामो समयदेखि कुरा चलिरहेको छ, तर उहाँ सुवास नेम्वाडभन्दा दायाँबाँया गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न’, बैठकमा दाहालले भने ‘पार्टी एकताका बेला प्रधानमन्त्रीसँग सभामुख साटिएको हो, सुवास नेम्वाड नै हुनुपर्छ भनेर अडान नलिनुहोस् भन्दा उहाँले मान्नु भएको छैन ।’
दाहालले सभामुख जसरी पनि पूर्वएमालेले लिने भए प्रधानमन्त्री छोड्न ओलीलाई आफुले प्रस्ताव गरेको पनि बैठकमा सुनाए । ‘तपाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुहोस्, म प्रधानमन्त्री बन्छु, त्यसो गर्दा सभामुख तपाईले चयन गरेको ब्यक्ति बनाऔ भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु’ , बैठकमा दाहालले भने ।
गौतम निवासमा पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई पनि बोलाइएको थियो । तर उनीहरु बैठकमा सहभागी भएनन् । सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापा बादल भने विदेश भ्रमणमा छन् ।गौतम निवासको बैठक सकेपछि अध्यक्ष दाहाल सिधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटारमा उनले बैठकमा भएका कुराहरु सुनाएका थिए ।